Tsy sarona OnePlus 9: voasivana ny endri-javatra | Androidsis
Ampahany nambara tamin'ny mampiavaka ny OnePlus 9
Ny marina dia ireo famoahana mifandraika amin'ny OnePlus 9 sy OnePlus 9 Pro. Fantatsika izany ho tonga miaraka amina charger ny maodely roa, tsy toy ny mpanamboatra hafa toa an'i Apple na Samsung. Ary manomboka manana antsipiriany vaovao momba ny mampiavaka azy isika izao
Ankehitriny, nisy sary vaovao navoaka izay ahitantsika ny antsipiriany bebe kokoa momba ny famolavolana, ankoatry ny toetra teknika lehibe hametrahan'ny OnePlus 9.
Snapragon 888 sy endri-javatra maro hafa amin'ny OnePlus 9
Hanombohana azy dia voamarina fa hametaka ny processeur Snapdragon 888, ilay vatosoa amin'ny satroboninahitr'ilay mpanamboatra Koreana ary manome fampisehoana tsy azo isalasalana. Amin'ity SoC mahery ity dia mila manampy RAM farafahakeliny 8 GB ianao, na dia toa misy aza ny kinova vitamina iray hafa ary hanana RAM 12 GB izany.
Mikasika ny tontonana izay hametaka ny terminal, antenaina fa ny efijery OnePlus 9 dia hamorona a Tontonana AMOLED 6.55-inch izay hahatratra ny vahaolana Full HD +. Na dia ny ampahany mahaliana indrindra aza dia miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz (mbola tsy fantatra raha toa ka mifanaraka) mba hankafizanao traikefa sary mahafinaritra. Ary eny, ny OnePlus 9 Pro dia hanana tontonana 2K mitazona toetra mitovy amin'izany.
Afaka nahafantatra antsipirihany vaovao momba ny baterian'ny OnePlus 9 koa izahay, izay hanana fifehezana 4.500 mAh ary fiampangana haingana 65W izay manondro fomba hanolorana fizakan-tena tena tsara. Tsy manana angon-drakitra misimisy kokoa momba ny mety ho fahaizan'ny anatiny ao amin'ilay fitaovana izahay, fa ny zavatra lojika indrindra dia ny fiatombohany avy amin'ny 128 GB an'ny memo anatiny.
Mikasika ny famolavolana, ireo sary tafaporitsaka isan-karazany dia mamela kely fotsiny amin'ny eritreritra. Ny OnePlus 9 dia hirehareha amin'ny fakantsary misy lavaka eo anoloana mba hisorohana ny fijirika voajirika, ary koa ny frame minimalist ka ny efijery terminal no mpandray anjara fototra. Ny daty famoahana azy? Amin'izao fotoana izao dia misitery tanteraka ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ampahany nambara tamin'ny mampiavaka ny OnePlus 9
Ahoana ny fanovana ny haben'ny litera ao amin'ny Google Chrome
Ahoana ny fomba fisorohana ny One UI 3.0 tsy hanakatona ny apps background